अझै कति छन् सञ्चिताले गरेका फिल्म ? - Filmy Hotline
अझै कति छन् सञ्चिताले गरेका फिल्म ?
गएको दुई वर्ष अगाडि फिल्म ‘राधा’ रिलिज भयो । बक्सअफिसमा औसत रहेको यस फिल्ममा अभिनेत्री सञ्चिता लुइँटेल, अभिनेता जीवन लुइँटेलको अपोजिटमा थिइन् । यसपछि सञ्चिताले अभिनय गरेका कति फिल्म रिलिज भए ? दर्शकलाई मात्र होइन स्वयं उनलाई पनि थाहा नहोला ! तर, जति पनि आए ती कुनै चलेनन् ।
निखिल उप्रेतीसँग विवाह गरेपछि काँचको पर्दाबाट उनी लामै समय टाढा बसेकी थिइन् । छोरा स्कुल जाने भएपछि उनले ‘नाइँ नभन्नू ल ३’ बाट सुखद कमब्याक गरिन् । तर, फिल्म चले पनि जस उनले पाइनन् । उक्त फिल्मले उनको हातमा केही फिल्म भने पारे, जुन अहिले एकपछि अर्को गर्दै रिलिज भइरहेका छन् ।
गएको कात्तिक ३० गते उनी अभिनीत फिल्म ‘गुनगुन’ रिलिज भएको थियो । यसमा उनी टाइटल क्यारेक्टरमा नै थिइन् । तर, यस फिल्मको न कुनै कार्यक्रम न त प्रचारमा नै हिँडिन् उनी । ‘‘गुनगुन’ मेरै फिल्म हो’’ भन्ने नै सायद विर्सिसकेकी पो थिइन् कि उनले ! उनले फिल्मलाई वास्ता नगरेझैं दर्शकले पनि हलसम्म जाने जाँगर चलाएनन् ।
अब फेरि शहरका भित्तामा ‘गुनगुन’ को पोस्टरको रंग नउड्दै अर्को फिल्मको पोस्टर टाँसिने तयारीमा छ । उनको नयाँ फिल्म हो ‘आरोप’, जुन माघ ११ मा रिलिज हुँदैछ । यसमा उनको हिरो किशोर खतिवडा छन् । के यो फिल्म उनलाई ‘कहिले गरेको थिएँ’ भन्ने स्मरण होला ? वा, ‘यो मेरै फिल्म हो र !’ भन्नेमा नै कन्फ्यूज छिन् ?
‘गुनगुन’ र ‘आरोप’ जस्ता अझै उनले अभिनय गरेका फिल्म कति रिलिज हुन बाँकी होलान् ? न प्रचारमा न त फिल्मको कुनै कार्यक्रममा उपस्थिति जनाउने सञ्चिताले के यी सबै फिल्म पैसाका लागि मात्र गरेकी थिइन् ? वा, रिलिज हुन बाँकी फिल्म आफ्नो भन्न उनलाई लज्जाबोध भएको हो ? उनीमाथि अनगिन्ती प्रश्न थुप्रिएका छन् ।
एकसमय नेपाली फिल्ममा अभिनेत्री सञ्चिताको दबदबा थियो । निर्माता/निर्देशकहरु फिल्ममा हिरोइनको रुपमा उनलाई लिन तँछाड-मछाड गर्दथे । तर, विस्तारै उनले आफ्नो साख गुमाउँदै गइन् । संख्यात्मक अभिनयमा जोड दिँदा अहिले उनको करिअर ‘यता न उता’ को अवस्थामा पुगेको छ । -फिल्मी खबरबाट
Prevमनकामना माताले हामी सबैको मनोकाक्षा पूरा गरुन् : तपाईको आजको राशिफल- माघ ५ गते शनिबार
Nextहमाल भन्छन्, ‘फिल्म नपाएको होइन, ब्रेक लिएको हुँ’
नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा जारी आजको बिदेशी बिनिमय दर यस्तो छ –
नेपाल आइडल सिजन २ का विजेता रवि ओडलाई कन्चनपुरमा भव्य स्वागत, देखियो यस्तो दृश्य (भिडियो)
अशोक दर्जीको दोस्रो गीत “चौरीको चाम्रो छुर्पी”को सुटिङ सकियो..